फिल्म ‘ग्रीन बर्ड’ को छायांकन १९ दिनमै सकियो - City Post Daily
October 1, 2021 मनोरञ्जन
काठमाडौं, १५ असोज । फिल्म ‘ग्रीन बर्ड’ को छायांकन १९ दिनमै सकिएको छ । सरदर नेपाली फिल्मको छायांकन ३०–३५ दिनसम्म हुने गर्छ । त्यसअघि फिल्मको छायांकन सकिने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । २५ दिनको सेड्युल बनाएर छायांकनमा निस्किएको फिल्मको मंगलवार अन्तिम सिन खिचियो । फिल्मको सम्पूर्ण छायांकन चितवन–नवलपुरमा भएको निर्देशक प्रमोद कँडेलले जानकारी दिए ।
फिल्ममा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त मुख्य भूमिकामा छिन् भने कमलमणी नेपाल र अफरान अली लगायतको पनि अभिनय रहेको छ । योङ स्टार सिनेमाको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मले परिवार र समाजको मूल्य मान्यताविरुद्ध गएर आफ्नो जीवन जिउन चाहने एक युवतीको संघर्षको कथा वाचन गर्ने बताइएको छ । यो फिल्मको स्टोरी र स्क्रिनप्ले निर्देशक कँडेल आफैंले तयार पारेका हुन् ।
फिल्ममा सुरक्षा माइक्रोबायोलोजी पढिरहेकी २२ वर्षिय युवतीको भूमिकामा छिन् । कात्तिक स्मित कर्नाटकले खिचेको फिल्मलाई अन्जय खड्काले सम्पादन गर्नेछन् । छायांकन सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेथड एक्टिङलाई चित्रण गर्न फिल्मका सम्पूर्ण कलाकारलाई चितवनको एक घरमा राखेर दुई हप्तासम्म कार्यशाला गरिएको थियो । फिल्मलाई यसै वर्ष प्रदर्शन गर्ने तयारीमा निर्माण टिम छ ।
यसैगरी, ‘थाहा’ आन्दोलका प्रणेता स्वं. रुपचन्द्र विष्ट ‘रुदाने’ को जीवनीमा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म ‘रुदाने ः विद्रोहको नेपाली नाम’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । २ मिनेट ३३ सेकेण्ड लामो टिजरमा रुपचन्द्र विष्टको चरित्र–चित्रण गरिएको छ । टिजर संवादविहीन छ । फिल्ममा दिव्य देवले रुपचन्द्रको भूमिका निभाएका छन् । यो फिल्म चार वर्ष अगाडि नै निर्माण भएको थियो ।
अमित किशोर सुवेदी र विकास ढकालको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा नम्रता श्रेष्ठ, रवि गिरि, सुभाष गजुरेल, अमर सुवेदी लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । फिल्ममा जागृत रायमाझी कार्यकारी निर्माता र भानुभक्त थापा सह–निर्माता छन् । शान्ता राओको छायांकन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन र जेसन कुँवरको संगीत रहेको फिल्मको प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छैन ।
को हुन् ‘रुदाने’ ?
बाबु पदमबहादुर विष्ट र आमा चित्रकुमारीको कोखबाट वि.स. १९९० पौष २६ मा मकवानपुरमा जन्मिएका उनी चेतना फैलाउने जनबादी नेता थिए । उनले ०२९ र ३० सालतिर ‘थाहा’ आन्दोलन सुरू गरेका थिए । उनी चट्टान, भित्ता, पर्खाल, रूखदेखि खाली कागज र चुरोटको बट्टासम्म ‘थाहा’ लेख्दै हिँड्थे । उनी २०२८ सालमा स्नातक कोटामा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य समेत भएका थिए ।
उनले तीन दशक ‘थाहा’ आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यस आन्दोलनको उद्देश्य थियो, ‘चेतनाहीन जनताको चेतनासम्पन्न नागरिकमा रूपान्तरणमार्फत राजनैतिक र सामाजिक जागरण ल्याउनु ।’ जीवनको उतार्धमा उनले सहयोगीहरुलाई आफ्नो मृत शरीरमा अविर–माला नलगाउन, काजक्रिया नगर्न र लासको राजनीति नगर्न भनेका थिए । उनको मृत्यु २०५६ असार ७ गते भएको थियो ।